Soomaali Dil loogu geystay Magaalada Vienna Dalka Austeria (AKHRISO) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Soomaali Dil loogu geystay Magaalada Vienna Dalka Austeria (AKHRISO)
Vienna(Halqaran.com) Muwaadiniin Soomaali ah ayaa lagu soo warramayaa in saacadihii lasoo dhaafay lagu dilay Magaalada Vienna ee Caasimadda dalka Austeria, waxaana kasoo baxaya faah faahino dheeraad ah dilkaas dhacay.
Laba gabdhood Soomaali ah ayaa meydadkooda laga helay Guri ay ka daganaayeen Magaalada Vienna oo da’dooda lagu kala sheegay inay kala aheyd 28-sano jir iyo 37-sanno jir, kuwaasi oo kamid ahaa Soomaalida kunool Austeria.
Dilka loo geystay labada gabdhood ayaa waxaa la tilmaamay in lagu tuhunsanyahay Wiil dhalinyaro oo Soomaali ah oo 28-sanno jir ah, waxaana la sheegay in mid kamid ah gabdhaha uu xiriir kala dhexeeyay.
Wararka aya waxa ay sheegayaan in Booliska Magaalada Vienna ee Caasimadda dalka Austeria ayaa gacanta ku dhigay wiilka lagu tuhmayo inuu ka dambeeyay dilka dhacay, kaasi oo ay haatan ku wadaan baaritaano kala duwan, isagoona xiligii la qabanayay isticmaalay maandooriye.
Inta badan Qaar kamid ah dalalka Yurub ayaa waxaa dilal loogu geystaa Muwaadiniin Soomaali ah, halka qaarkood Soomaalida iyagu is dilaan, waxaana dhowr jeer oo horey sidaan oo kale Magaalooyin ku taalla dalalka Yurub dlal loogu geystay Muwaadiniin Soomaaliyeed.